किन खस्कीयो शेयर बजार ? – Devil's Advocate
"Wrong does not cease to be wrong because the majority share in it” ― Leo Tolstoy
किन खस्कीयो शेयर बजार ?
Date: June 18, 2018Author: Devil's Advocate 1 Comment
शेयर बजारमा आएको लगातारको गिरावटलाई विभिन्न स्वार्थ समुहले आफ्नो स्वार्थ अनुसार विभिन्न तरिकाले विश्लेषण गरेका छन। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस र नेपाली कांग्रेस समर्थित विज्ञहरुको समुहले शेयर बजारमा आएको गिरावटलाई नेपाली लगानीकर्ताले कमनिष्टहरुको सरकारलाई नपत्याएको भनेर व्याख्या गरि रहेको छ भने लगानीकर्ताको हक हितका लागि लड्ने कथित लगानीकर्ता संघहरुले अर्थमन्त्रीको शेयर बजार प्रतिको Hostile प्रवृतिले शेयर बजारमा लगातार गिरावट आएको भन्दै प्रचार गरि रेहेका छन। स्वतन्त्र मिडियाको नाममा पार्टिको भजन गाउने मिडियाले भने यो विषय कमनिष्ट सरकार माथी प्रहार गर्ने हतियारको रुपमा प्रहार गरि रहेको छ।
कस्तो छ अहिलेको शेयर बजारको अवस्था?
आजको दिनको कारोबार बन्द हुँदाको बखतमा समग्र शेयर बजारलाइ प्रतिनिधित्व गर्ने सुचांक नेप्से १२३५.१५ अंक छ भने क्षेत्रगत सुचांकमा वित्त कम्पनीहरुको सुचांक सबै भन्दा कम ६१५.४७ अंक छ भने विमा कम्पनीहरुको सुचांक सबै भन्दा बढी ६३०३.१४ अंक छ। त्यसै गरि शेयर बजारको कुल बजार पुँजीकरणको ५० प्रतिशत भन्दा बढी हिस्सा भएको बैंकिंग कम्पनीहरुको सुचकांक १०४१.१६ अंक रहेको छ।
सुचांकको दृष्ट्रीमा सबै भन्दा अब्बल रहेको विमा कम्पनीको आम्दानी हर्ने भने यी कम्पनीहरुको मुल्यलाई यिनीहरुको आम्दानीले न्याय गरेको गरेको छैन। गतबर्ष लगानीकर्ताहरुलाइ दिएको नगद प्रतिफललाई मापदण्ड मान्ने हो भने १५ % भन्दा बढी नगद लाभंस दिने १५ कम्पनीको सुचीमा २ मात्र विमा कम्पनी रहेका छन। राम्रो प्रतिफल नदिए पनि किन यी कम्पनीका शेयर किन उच्च मुल्यमा खरिद विक्री भइ रहेका छन त? यो कुरा बुझ्न नेपाली लगानीकर्ताहरुको प्रवृति बुझ्न जरुरी छ। नेपाली लगानीकर्ताको रणनिती तत्काल नाफा कमाउने भएर गएको छ। जस्ले गर्दा नाफामुलक कम्पनी जस्ले बर्षेनि राम्रो नगद लाभासं दिन्छ ति कम्पनीको शेयर भन्दा बोनस र राइट शेयर दिने कम्पनीको शेयर प्रति लगानीकर्ताको झुकाव देखिएको छ। विमा कम्पनीहरु लाइ जारी पुँजी बृद्धि गर्नु पर्ने बाध्यताले गर्दा विमा कम्पनीहरुले भटाभट राइट र वोनस शेयर जारी गर्दैछन भने कतिपय विमा कम्पनी राइट र बोनस शेयर जारी गर्ने अवस्थामा छन। त्यहि कारणले गर्दा यी कम्पनीहरुको शेयर आम्दानीको तुलनामा अत्याधिक मुल्यमा खरिद बिक्री भइ रहेका छन।
किन खस्कियो शेयर बजार?
स्वार्थ समुहले चलाएको सबै हल्लालाई थाँती राखेर हेर्ने हो भने शेयर बजारको यो अधोगती निस्चित प्राय नै थियो । अर्थशास्त्रको आधारभुत सिद्धान्त अनुसार अन्य कुरा यथावत रहेमा माग र आपुर्तीले कुनै पनि बस्तु वा सेवाको मुल्य निर्धारण गर्दछ। शेयर कारोबार काठमाडौं उपत्यका र उपत्यका बाहिरका केहि ठुला शहरमा सिमित हुनाले शेयरको मागमा भनेजस्तो सुधार आउन सकेको छैन भने अर्का तर्फ विगत एक डेढ बर्षमा सार्वजानिक निष्कासन, राईट शेयर र बोनस शेयरको निष्कासनमा अत्याधिक बृद्धिले माग र आपुर्तिको समिकरण आपुर्ती साइड तिर झुकेको छ। मागमा आएको बृद्धि भन्दा आपुर्तीमा अत्याधिक बृद्धि भएकोछ।
आंकडामा हेर्ने हो भने २०७३ पौष मसान्त सम्ममा सुचिकृत शेयरको संख्या २ अर्ब ४९ करोड कित्ता रहेकोमा २०७५ बैसाख महिनामा यो संख्या ३ अर्ब ४८ करोड रहेको छ। अर्थात १७ महिनाको अवधीमा सुचिकृत शेयरको संख्यामा लगभग ४० प्रतिशतले बृद्धि भएको छ। यो आंकडा अनुसार शेयर बजारमा हरेक महिना औषत ५८ करोड कित्ता शेयर थपिएका छन। यी थपिएका शेयर मध्ये ४० प्रतिशत शेयर बोनस (जुन सुचिकृत हुँदा वास्तविक नगद प्रवाह हुदैन) र राइट/IPO/FPO को हिस्सालाई ६० प्रतिशत मान्ने हो भने हरेक महिना लगानीकर्ताले ३.५० अर्ब रुपैया IPO/FPO र राइट शेयरमा लगाइ रहेका छन। यस्ता निष्कासनले लगानीकर्ताको लगानी योग्य रकम प्रशोचन गरेकाले दोस्रा बजारका लागी लगानीयोग्य रकम क्रमस अभाव हुदै गइ रहेकोछ। जस्ले गर्दा दोस्रो बजारमा माग लगातार गिरावट आइ रहेको छ।
जबसम्म लगानीको ठुलो हिस्सा प्राथमिक तथा राइट शेयरमा लगाउनु पर्ने अवस्था रहन्छ तबसम्म दोस्रो बजारका शेयरमा माग कमि हुनेछ। NMB बैंक र नेपाल बैंकका ठुला FPO, तामाकोशीको IPO आउन बाँकी नै रहको अबस्थामा यी निष्कासनले लगानीकर्ताको लगानी योग्य रकमको ठुलो हिस्सा प्रशोचन गर्नेछन। जस्ले गर्दा आगामी दिनमा दोस्रो बजारका शेयरको मागमा कमी हुने छ। दोस्रो बजारमा मागको कमी भए शेयरको मुल्य कम हुनेछ, शेयरको मुल्य कम भए शेयर बजार ओरालो लाग्ने निश्चितप्राय नै छ।
Photo credit- dreamstime.com
A youth working for Equality but strong critic of caste/community based reservation system.	View all posts by Devil's Advocate
Previous Previous post: नेपाल बैंक र NMB बैंक FPO को , कस्को किन्ने?
Next Next post: बाटो बिराएको आन्दोलन
One thought on “किन खस्कीयो शेयर बजार ?”
Aakash bhattarai says:
Explained so well that clear picture of market is seen…
© 2019 Devil's Advocate